Ny kinova vaovao an'ny Darktable 3.0, dia misy interface vaovao nohavaozina sy bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Taorian'ny fampandrosoana iray taona mavitrika, ny fanombohana ny kinova vaovao dia nambara ny programa handaminana sy hikarakarana sary nomerika Darktable 3.0. Tabilao maizina miasa ho toy ny safidy hafa maimaim-poana amin'ny Adobe Lightroom ary manam-pahaizana manokana amin'ny asa tsy manimba miaraka amin'ny sary manta.
Darktable manome safidy maodely be dia be hanatanterahana karazana asa fanodinana sary, mamela anao hitazona tahirin-tsary misy loharanom-pahalalana, manome fitetezana sary amin'ny alàlan'ny sary efa misy ary, raha ilaina dia manatanteraka hetsika hanitsiana ny fanodikodinana sy hanatsara ny kalitao, hitazonana ny sary tany am-boalohany sy ny tantaran'ny fiasa rehetra miaraka aminy. Ny kaody tetikasa dia zaraina eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPLv3.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Darktable 3.0?
2 Ahoana ny fametrahana Darktable 3.0 amin'ny Linux?
Inona no vaovao ao amin'ny Darktable 3.0?
Anisan'ireo zava-baovao aterak'ity kinova vaovao ity dia afaka mahita izany avy hatrany isika ny interface dia nohavaozina tanteraka ary ny fifindrana mankany GTK / CSS.
Ny singa interface rehetra dia azo fehezina amin'ny fampiasana lohahevitra CSS, miaraka amin'izany andiana lohahevitra maromaro no nomanina nohamarinina hampiasaina amin'ny mpanara-maso ambany sy avo lenta.
Ho fanampin'izany Ho hitantsika ny kinova vaovao amin'ny «Module tone tone» »ary« tononkalo «Equator» ». Ireo modules dia manome fitaovana mahery vaika hiasa amin'ny sary sy afaka manolo tanteraka ny modely "base curve", "shadow and light" ary "tonal display" izy ireo.
Modely nampiana mitahiry loko amin'ny maody "Fiolahana base".Ity maody ity dia alefa amin'ny alàlan'ny default (amin'ny maody "Bright") ary afaka manova ny fisehoan'ny fisie vao nampidirina raha oharina amin'ireo rakitra JPEG noforonin'ny fakan-tsary.
Ary koa ireo modely vaovao "RGB level" sy "curve tone RGB«, Izay manohana ny fiaraha-miasa amin'ireo fantsona tsirairay ao amin'ny habaka RGB, ankoatr'ireo modules misy izay miasa ao amin'ny haban'ny Lab.
Ny fitaovana eyedropper miloko ao amin'ny modely Blend, Tone Curve, Zona loko ary ny famirapiratana, izay manohana ny fisafidianana ny salan'isa antonony ho an'ny faritra voafantina (Ctrl + kitiho ny sary famantarana eyedropper).
El ny tantaran'ny fanovana dia mampiseho ny modely "rafitra" miafina teo aloha. Mampiseho ny satan'ireo modules amin'ny tantara ny kisary.
Fanohanana amin'ny fanomezana hotkey ho an'ny mpikorisa tsirairay. Ohatra, ny fanaraha-maso onitra fanonerana. Manokatra ny fahaizana manova haingana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra manokana izany.
Nisy dinika nampiana hikirakira ny metadata aondrana, ahafahanao mifehy ny fanondranana tahirin-kevitra Exif, tag, ny hierarchy azy ireo ary ny angona geotagging.
Amin'ireo fanovana hafa izay afaka mahita:
Tohano amin'ny famerenana modules amin'ny filaharana ampiharina amin'ny sary (Ctrl + Shift + Drag).
Ny modely vaovao «3D Color Lookup Tables» miaraka amin'i Hald-CLUT sy Cube PNG fanohanana.
Fanohanana ho an'ny fanafoanana / famerenana amin'ny laoniny amin'ny maodelatra maivana ho an'ny marika, labozia miloko, fanasokajiana, metadata, tantaram-panovana ary fomba ampiharina.
Tohano ho an'ny maska ​​raster (karazana sarontava parametric manokana).
Sary kasety nohavaozina sy ny fomba histogram.
Nanova ny modely fanakanana ny tabataba momba ny tabataba. Niampy fanohanana ny mombamomba ny fakantsary vaovao.
Ny modely "fanovana ifotony" vaovao, izay ahafahanao manitsy haingana ireo teboka mainty, fotsy sy fotsy, manova ny saturation ary manisa avy hatrany ny fiparitahan'ny sary.
Tohano amin'ny fikarohana haingana ny modules amin'ny anarany.
Nanampy fomba fisafidianana sary (fampitahana amin'ny lafiny roa).
Nifindra avy tao amin'ny kofehy POSIX ka hatrany amin'ny OpenMP.
Fanatsarana marobe no natao ho an'ny SSE sy OpenCL.
Nanampy fanampiana ho an'ny fakantsary vaovao mihoatra ny 30.
Tohano ho an'ny Google Photo API vaovao miaraka amin'ny fahaizana mamorona rakikira mivantana avy amin'ny maizina (tsy mandeha amin'izao fotoana izao noho ny fanakanana nataon'i Google).
Ahoana ny fametrahana Darktable 3.0 amin'ny Linux?
Mpampiasa ny Debian, Ubuntu, Linux Mint na ny derivative rehetra amin'ireny dia tsy maintsy soratany amina terminal:
Ho an'ireo izay mampiasa Fedora na izay fizarana azo avy aminy, ny baiko tokony hampiasain'izy ireo dia:
Raha izy ireo mpampiasa ny kinova openSUSE Azonao atao ny manavao ny fampiharana miaraka amin'ny fanampian'ny YaST na avy amin'ny terminal, kitiho fotsiny:
Mpampiasa ny Arch Linux, Manjaro, Antergos, Arch Labs ary ireo derivatives hafa an'ny Arch Linux apetraho amin'ny:
Ho an'ireo izay mampiasa Gentoo na Funtoo, apetraho amin'ny:
Farany, ho an'ny RHEL, Linux Scientific, CentOS na mpampiasa derivative tsy maintsy manoratra ireto manaraka ireto izy ireo:
Finalmente raha tsy mbola misy ny fanavaozana amin'ny fizaranao, azonao atao ny manangona ny fampiharana toy izao. Voalohany dia azontsika ny kaody loharano:
Ary miroso amin'ny fanangonana sy fametrahana miaraka aminay izahay:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny kinova vaovao an'ny Darktable 3.0, dia misy interface vaovao nohavaozina sy maro hafa
Aorian'ny patch tampoka dia tonga ny kinova vaovao an'ny Wireshark 3.2.0 miaraka amin'ireo fanovana ireo